Sonke siyayazi into eyenziwa sisitshizi senkungu, ukuhambisa isitshizi senkungu ukuhambisa imveliso, kodwa ukhe wazibuza ukuba isebenza njani?
Okokuqala, ufuna kangakanani inkungu yakho?
Kuxhomekeka kwimveliso yakho, unokukhetha uhlobo lwe-misting esebenza ngcono kuwe. Isitshizi esinenkungu sihambisa inkungu emfutshane, egudileyo, ethambileyo ethandwa kakhulu kukhathalelo lomntu kunye neemveliso zezithambiso. Isitshizi esitshiza rhoqo siya kusasaza ipateni yokutshiza ende, ebumbeneyo, kunye nokuxinana.
Ihlala yenziwe ngeplastiki ecacileyo ye-PP, le cap isebenza njengeqweqwe lothuli kunye nokhuseleko olukhusela i-actuator ekuhambiseni ngempazamo imveliso.
Yile nto uyityhilizelayo ukuhambisa imveliso, ngokungafaniyo ne- impompo into yokuthambisa actuator, Inamacandelo angaphakathi okwenza ipatheni ethile yokuphambuka kwemveliso. umthengi utyhala ezantsi ukutshiza imveliso ngaphandle kwebhotile. Ezinye ii-actuator zikwanazo neempawu zokutshixa ezithintela ukuhanjiswa ngengozi.
Eli candelo lincinci kulapho kuhamba ulwelo ukwenza ipateni yenkungu, kwaye ilingane nangaphandle kwesixhobo sokwenza izinto. Kulapho imveliso iphuma khona kwisitshizi.
Ukuvalwa kokona kugcina indibano iphela kwaye kuyibambe kwibhotile. Ihlala yenziwe ngeplastiki ye-PP kwaye iza neendlela ezahlukeneyo zokugqiba kunye noyilo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, isinyithi ngaphezulu kweqokobhe.
Yiyo le nto evala ukuvalwa kwibhotile ukuthintela ukuvuza. Iimveliso ezahlukeneyo kunye nokwenziwa kweekhemikhali kufuna ukukhethwa kwezinto ezahlukeneyo, ke lelona candelo libaluleke kakhulu kuvavanyo lokuqinisekisa ukuhambelana.
Oomatshini banamacandelo amaninzi ahlukeneyo asongelwe kwenye, kubandakanya ipiston, isiqu, itywina, intwasahlobo kunye nekepusi yezindlu. Yiyo le into ehambisa imveliso ukusuka kwibhotile iye kwi-actuator. Ukucinezela i-actuator kutsala imveliso inyuse ityhubhu yediphu, ipiston iye kwi-actuator apho iphuma khona ngokufaka.
Le yityhubhu yeplastiki ende ephuma emazantsi ebhotile iye kutshiza. Ngokungafaniyo ne-tube ye-lotion pump yokuntywila, ityhubhu yesitshizi yesitshizi iyacekeka kwaye ihlala igotyiwe kancinci ukuyivumela ukuba ifike emazantsi ukuze ikwazi ukuhambisa konke okuqulathwe yimveliso.
Ixesha Post: Apr-01-2020